सपनामा देखेकाे मेयर कता हरायाे
प्रकाशित मितिः माघ १६, २०७५
बैधनाथ कुमार यादब
तराई मधेशका जनता मिति २०७४ असाेज २१ अाफनाे अमूल्य मत प्रयाेग गरि पहिलाे साशक चुनेकाे थियाे । हाल मधेश क्षेत्रमा १३६ स्थानिय सरकार रहेका छन् । लाेकतान्त्रिक विधि अनुसार मिश्रित निर्वाचन अन्तर्गत वडा देखि स्थानिय सरकार सम्म जनप्रतिनिध रहेका छन् । सिरहा जिल्लामा जम्मा १७ वटा स्थानिय सरकार रहेकाे छ । ८ वटा नगरपालिका र ९ वटा गाउँपालिकार रहेका छन् । जस मध्ये १० ठाउँमा नेपाल कमन्युष्ट पार्टि, ५ ठाउँमा संघिय सामाजवादी फाेरम नेपाल र २ ठाउँमा नेपाली काग्रेसका नेतृत्व प्राप्त गरेका छन् । निर्वाचन बेला जनप्रतिनिधिहरूले जनतालाई देखाएकाे सपना र लेखेकाे घाेषणा पत्र हालकाे नीति तथा कार्यक्रममा पर्न सकेकाे छैन् । जिल्लाकाे पूर्व दक्षिणमा अवस्थीत रहेकाे भगवानपुर गाउँपालिका जनप्रतिनिधि सपथ ग्रहण गरे देखि नै विवादीत हुँदै अाहेकाे छ । गत अार्थिक वर्षमा अन्त तर भए पनि गाउँसभा गरि ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरकाे थियाे । चालू अार्थिक वर्षमा सम्पूर्ण गाृँपालिका नै अन्याैलमा छ । दास्राे गाउँसभा नभएकै कारण कर्मचारी तलब सम्म खाएका छैन् । विकासका कार्यक्रम नहुदाँ बजेट खर्च शून्य अावस्थामा छ भन्ने कर्मचारी तलबका लागि अन्दाेलन गरि रहेका छन् । गाउँपालिका मेयर बेचन प्रसाद यादब विकास प्रेमि रहे पनि दलगत विवादका कारण जनप्रतिनिधि मिलन नसक्दा समस्या गम्भीर रूपमा बढदैछन माे. नजिर मियाँ बताउनु भयाे । सबभन्दा कम उमेरकाे जनप्रतिनिधिकाे रूपमा लाेक प्रिय मेयर सखुवान्नकारकटी गाउँपालिकाले पाएकाे छ । मेयर केदार प्रसाद यादबले गाउँमा कालाे पत्र गरेकाेले बढि लाेक प्रिय बनेकाे छ। वड स्तरका कार्य गति लिन नसक्दा विकास हुने जति भएकाे छैन्। गत वर्ष ८० प्रतिशत खर्च भएकाेमा हलकाे चालू अा. व. मा २० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेकाे छ । युवा नेता भएकाेले जनता विश्वस गरेकाे छ । तर पहिलाे वर्षमा रहेकाे जाेस वस्तारै सेलाउदैछ । जनतामा बाँडेकाे घाेषणा पत्र र प्रतिवद्वता अनुसार कार्य भएकाे छैन् देवेन्द्र यादबले बताउनु भयाे । लाहन नगरपालिकमा पनि विकासका गति जनताले देखन पाएन् । घाेषणा पत्र भन्दा पार्टि कार्य कर्ता खुश गरने कार्य मात्र भएकाे छ । गत अा. वा. मा ६५ प्रतिशत हाराहरिमा खर्च भएकाे थियाे । तर चालू अार्थिक वर्षमा १५ प्रतिशत मात्र खर्च भएकाे छ । ईमान्दार र विकास प्रेमि रहेका मेयर मुनिलाल साह नगरपालिकाकाे विकास भन्दा पार्टि कार्यकर्ता र शसन व्यावस्थालाई मिलाउनमा बेस्त रहेकाे सुमेव साहले बताउनु भयाे । राजनितिमा क्षेत्रमा विशेष प्रभावका रूपमा रहेकाे धनगडी माई नगरपालिमा पनि गरिव पडित जनताका वकालत गर्ने नेता मेयरमा अाएकाे छ । मेयार हरिनारायण चाैधरीले पनि स्थानिय सरकारमा विधिकाे शासन कायम गर्नमा मात्र देखिएकाे छ । गत वर्ष ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेकाे थियाे । विकासका कार्क्रममा धेरै याेजना अधुराे रहेकाे थियाे । तर हाल सम्ममा मात्र २२ प्रतिशत खर्च भएकाे छ । समय अवधिकाे हिसबले कार्य कमाेजर अावस्थामा देखिन्छ । नेतृत्व हिसाबले बलियाेदभए पनि निर्वाचन बेलाकाे घाेषणापत्र र नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनकाे अावस्था कमजाेर रहेकाे हृदयनारायण यादबले बताउनु भयाे । लक्ष्मीपुर पतारी टाउँपालिका पतारी पाेखरीकाे इतिहासिक महत्वका कारण प्रसिद्व रहेकाे छ । गाउँपालिका मेयर रामबल्लभ साह जितदै पतारी पाेखरी संरक्षणकाे कार्य सुरू गर्दा जनता खुशी भएकाे थियाे । गत वर्ष ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएकाे थियाे । चालू वर्षमा हाल सम्म १५ प्रतिशत मात्र भएकाे छ । पतारी पाेखरीकाे कार्य अधुरा नै छ । सडक पूर्वधार विकास कमजाेर अावस्थामा छन् । कडा भाषणले जनताकाे मन जितने मेयर प्रतिवद्वता र घाेषणा पत्र छुनै नसकेकाे देवेन्द्र यादबले बताउनु भयाे । पूर्वधार विकासकाे सबभन्दा कमजाेर अावस्था नवराजपुर गाउँपालिकामा छ । जनताले गुस्तर शिक्षा , स्वास्थ्य र खानेपानि पनि सहज प्राप्त गर्न सकेकाे छैन् । गत वर्ष ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएकाे थियाे । हाल सम्म कुनै पकि सडक पनि बन्न नसकेकाे गाउँपालिकामा बढि बजेट सडक निर्माणमा खर्च भएकाे छ । सडककाे अावस्था जिर्न छन् । चालु वर्षमा जम्मा १० प्रतिशत ससर्त खर्च भएकाे छ । विकास कार्य गति लिन सकेकाे छैन् । मेयर विश्वमाेहन यादबले घाेषणापत्र , प्रतवद्वतालाई नछाेएकाे र स्थानिय सरकारबाट शासन संचालन गर्ने विधि पनि बनाउन नसकेकाे शिवउदगार यादबले बताउनु भयाे । बरियारपटी गाउँपालिकले युवा र उधाेगी मेयर प्राप्त गरेकाे छ । उधाेग क्षेत्रमा सघंर्ष गरेकाे मेयर संताेष कुमार महताेलाई जनताले विकासमा अगाडि बढाउने सपान देखेका छन् । गत ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएकाे गाउँपालिकमा ठाेस कार्य पनि भएकाे छ । गत वर्षका विकासका कार्यकम बारेमा सूचना दिन नसकेकै कारण समस्याहरू हाफ पनि देखिएकाे छ । चालू वर्षमा १० प्रतिशत ससर्त बजेट मात्र खर्च भएकाे छ । जनता समक्ष वितरण गरेकाे घाेषणापत्र र प्रतिवद्वता कार्यन्वयनका लागि प्रयास मात्र भएकाे देखिन्छ संताेष कुमार यादबले बताउनु भयाे । पछाडी पारिएकाे र विलक्षण स्वभाव व्यत्तिलाई अागडी ल्याउनु पर्छ साेच विचार साथ गाेल बजार नगरपालिकाले संघर्षशील व्यत्ति मेयार विश्वनाथ साहलाई जनताले मानेका छन् । गत वर्ष ७० प्रतिशत बजेट गाेल बजार नगरपालिकामा भएकाे थियाे । विकास निर्माणमा सक्रिता हुन नसकेकाे नगरपालिका हाल सम्म १५ प्रतिशत बजेट खर्चा मात्र गर्न सकेकाे छ । घाेषणापत्र र प्रतिवद्वतालाई हाल सम्म पनि छुन नसकेकाे लालबाबु ठाकरले बताउनु भयाे । शत्ति र जनताकै बाेलि बाेलने मेयर नरहा गाउँपालिकाले पाएकाे छ । मेयर पदमा रहेपनि विकास किन गति लिन नसकिरहेकाे विषयमा चिन्ता गरिरहेकाे छ । भ्रष्टाचार र कर्मचारी तन्त्रकाे सर्वपरि प्रभावका कारण मेयर जनता भएर साेचन् बाध्य भईरहेकाे छ। गत वर्ष ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेपनि विकास अधुरा अावस्था छ । स्थानिय सरकार सञ्चालनका अनुभव कम भएका कारण स्थानिय सरकार समस्यामा रहेकाे किशाेरी साहले बताउनु भयाे । ईमन्दार र साझाेकाे प्रभावमा अर्नामा गाउँपालिका मेयार ठकु महताे बनेकाे छ । गत वर्ष ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएकाे थियाे । विकासका कार्यक्रम अधुराे अावस्थामा रहेकाे छ । गत वर्षकाे हिसाब मिलान चालू वर्षमा गर्न नसकेकाे कारण गाउँसभा हुन नसकेकाे हाे । अधुरा कार्य बजेट निकाशा र हाल सम्मा हिसाब मिलान नभएका कारण ईमान्दारीता माथि विभिन्न प्रश्न उठिरहेकाे छ । ससर्त तर्फ ५ प्रतिशत बजेट खर्च भएकाे छ । चालू वर्षका कार्यक्रम अन्याैलमा रहेकाे नागेन्द यादबले बताउनु भयाे । ईमान्दार र अनुभव भएकाे हिसाबले विष्णुपुर गाउँपालिका मेयरमा जागेश्वर यादबले बन्न सफल भएकाे हाे । कमला सिँचाई परियाेजनामा जनतालाई गरेकाे सेवाले जनताका विश्वास प्राप्त गरेकाे हाे । गत वर्ष ९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेकाे थियाे । विकासका कार्य अधुराे रहेपनि समयमा गाउँसाभा गराई चालू वर्ष २५ प्रतिशत खर्च गरेकाे छ । विकास कार्यक्रमहरूलाई गति बढईरहेकाले जनता विश्वास गरेकाे शिवदियाल यादबले बताउनु भयाे । युवालाई परिवर्तन सम्वाहकका रूपमा अाैरही गाउँपालिका वाँसीले सिद्वार्थ यादबलाई मेयरमा ल्याउनु भएकाे छ । गत वर्ष ६० प्रतशत बजेट खर्च भएकाे थियाे । विकासकाे प्रभाव नदिएकाे जनताले विभिन्न अाराेप पनि लगाई रहेका छन् । चालू वर्षमा १० प्रतिशत बजेट खर्च गरेकाे छ । पहिलाे गाउँपालिका देखि नै विवदीत भईरहेकाे मेयरले हाल सम्म घाेषणापत्र र प्रतिवद्वता कार्यन्वयन गर्न सकेकाे छैन । खर्च हिसब विषय लगायतका विभिन्न कमवाेरी रहेकाे अाराेप जनता लगाईरहेका पाेषण यादबले बताउनु भयाे । जनताका मेयर भनेर चिनिने सिरहा नगरपालिका मेयार असेश्वार प्रसाद यादबलाई विकास र जनताका कार्य सहव हुने विचबाट अाएकाे हाे । सिरहा नगरपालिकाले गत वर्ष ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेकाे थियाे । विकास कार्यक्रम सम्पन गरे पनि केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेन् । घाेषणापत्र र प्रतिवद्वतालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरे पनि कर्मचारी व्यावस्थापनका कारण कार्यन्वयन गर्न अवराेध भएकाे थियाे । चालू वर्षमा २५ प्रतिशत खर्च भएकाे छ । गत वर्षका अधुराे र नयाँ कार्यक्रम सञचालन भएकाे छ । नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि जनप्रतिनिधिहरू सक्रियता नभएकै कारण विकास गति लिन नसकेकाे शाेभा मंडलले बताईन् । शिक्षा ज्याेतीकाे प्रभाव र व्यापारीक दखलताकाे कारण जनताले सूर्यनाथ मंडललाई मेयार बनाउनु भएकाे छ । गत वर्ष ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएकाे थियाे । विकास निर्माणमा भएकाे अनिमिताकाे कारण कर्मचारी भ्रषटाचारमा परेकाे थियाे । जसका कारण विकास निर्माण बढि प्रभावित भएकाे थियाे । विकासका कार्यक्रम सम्पन भएपनि धेरै अधुराे पनि रहेकाे थियाे । चालू वर्षमा १५ प्रतिशत मात्र खर्च भएकाे छ । विकासकाे कार्य गति थलिनु र शिक्षालयहरूमा विवाद हुन विषयहरूका कारण विभिन्न अाराेपहरू लागि रहेकाे साेनेलाल मंडल बताउनु भयाे । गरिव,दलित र स्वसित पिडितका पक्षमा मअाेवादी अन्दाेलन काल संर्घषकाे परिनाम हाे कर्जन्हा नगरपालिका मेयर गंगा प्रसाद पासमान । गत वर्ष कर्जन्हा नगरपालिकामा ६० प्रतिशत सम्म खर्च भएकाे थियाे । स्थानिय सरकर चुनव पछि नगरपालिकामा स्थाईत्व भएन् । दलित र ब्रहमण , क्षेत्रीका नाराले झन समस्याहरू बढदै गईरहेका छन् । चालू वर्ष पनि गत वर्ष जस्तै वितिरहेकाे छ । विकास प्रेमी जनताले कार्य नभई बजेट खर्च देखेर चिन्तीत पनि भएका छन् । मेयरकाे अपरिपक्ता र विभिन्न व्यत्तिहरू फैलाएका जाति द्वन्द्वका कारण जनताका विकास र मेयर प्रति अविश्वास उत्पन भईरहेकाे लिला महताेले बताईन् । यसरी सिरहाकाे स्थानिय तहका मेयरले जनताकाे सपना पूरा गरिरहेकाे देखियाे । सरकारले बेलैमा ध्यान नदिईए नेपाल समवृद्विकाे नारा यश जिल्लाकाे लागि कागमा पढुनु बाहेक केही नहुने वुद्विजिविहरूकाे तर्क छन् ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गमा चक्काजाम, अवस्था तन
सिरहा । सिरहाको बन्दिपुरस्थित पूर्वपश्चिम् राजमार्गमा चक्काजाम गरिएको छ । सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका ३ बन्दिपुरमा अवस्थित शर्पदंश उपचार केन्द्रको लापरवाहीका कारण एक युवकको मृत्यू भएको भन्दै बन्दिपुरस्थित पूर्वपश्चिम् राजमार्गमा चक्काजाम गरिएको हो । शर्पले टोकेपछि उपचारका लागि शर
गोलबजार नगरपालिका का सब ओभरसियर ५० हजार घु
मिथिला रत्न ,सिराहा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोलबजार नगरपालिका कार्यलयका सब ओभरसियर रंगेहात पक्राउ परेका छन् । गोलबजार नगरपालिकाका वार्ड नं. ९ मा बस्ने सब ओभरसियर श्रेष्ठ रहेकी छ्न । श्रेष्ठले शोचालय निर्माण कार्यक्रमको लागि सेवाग्राहीसँग रकम ५० हजार रुपै
Breaking News :नापी कार्यालय सिराहामा आगला
मिथिला रत्न ,सिराहा । नापी कार्यालय सिराहामा आगलागि भएको छ । आज बिहान ११ बजे जेनेरेटर चलाउने क्रममा आगलागि भएको हाम्रो सम्बादाता सोनु मिश्राले जानकारी गराएका छ्न । बिस्तृत बिबरण आउन बाकी ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गमा चक्काजाम, अव
गोलबजार नगरपालिका का सब ओभरसियर ५०
Breaking News :नापी कार्यालय सिराहा
बाढी प्रभाबितलाई राहत लिएर घर घर पु
विद्यार्थीको हत्यामा संलग्न अभियो
मुस्कानको वार्षिकोत्सव कार्यक्रम स्
सिराहाका बाढी पीडितहरु भोक- भोकै बस
कमला नदी बाढीपिडितले सरकार खाेज्दै
आज पनि भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क
कमला नदिमा फसेका ९ जनाको हेलिकप्टरब
Breaking News : कमला पुलमाथि चढयो ब
निरन्तरको वर्षाले डुबानमा सिरहा, कम
मृतक परिवारलाई ३ लाख , राहत तथा उद्
कमला र सप्तकोसि नदिमा पानीको बहाब
अभिभावकको जिम्मेवारी बहन गरेनन् प्र